Kadib Fariintii Cadayd Ee Jamaahiirta Madrid Ay Bandhigii Eden Hazard Ku Dalbadeen Kylian Mbappe-Qorshaha Florentino Perez Oo Wax laga Ogaaday. - Gool24.Net
Kadib Fariintii Cadayd Ee Jamaahiirta Madrid Ay Bandhigii Eden Hazard Ku Dalbadeen Kylian Mbappe-Qorshaha Florentino Perez Oo Wax laga Ogaaday.
Jamaahiirta kooxda Real Madrid ayaa ilaa hadda goob joog u noqday kooxdooda oo saxiixyada ugu badan ee suuqa kala iibsiga samaysay laakiin waxay heshiiskii ugu waynaa ee ay Madrid ku soo bandhigtay Santiago Bernabeu oo Eden Hazard ahaa ay ku dalbadeen in Kylian Mbappe la keeno.
Dareen kala duwan ayaa laga bixiyay in jamaahiirta Real Madrid ay ku heesayeen: “Waxaanu doonaynaa Kylian Mbappe” intii lagu jiray bandhigii Eden Hazard waxayna muujiyeen sida ay u doonayaan in da’yarka reer France uu noqdo xidiga xiga ee uu Perez kooxda keenayo.
Laakiin waxaa war laga helay qorshaha madax wayne Florentino Perez ee ku aadan in uu xagaagan PSG kala soo saxiixdo xidiga jamaahiirta kooxdiisa riyada u ah ee Kylian Mbappe.
Wargayska Sport ayaa shaaciyay in Florentino Perez uu iska diiday in uu iska dhiibo riyadiisa ah in uu xagaagan la soo wareego Kylian Mbappe waxaana sidoo kale la xusay in xidhiidhka maamulada PSG iyo Real Madrid uu yahay mid fiican.
Saddexda ciyaartoy ee uu hadda Florentino Perez suuqa ka doonayo ayaa lagu sheegay Kylian Mbappe, Pual Pogba iyo xidiga kooxda Tottenham ee Christian Eriksen oo dookha labaad ugu ah haddii ay Pogba waayaan.
Florentino Perez ayaa ka war qaba cabashada uu dhawr jeer Mbappe ka muujiyay kooxdiisa PSG iyo sida aanu ugu faraxsanayn xili ciyaareedkii uu Paris ku soo qaatay.
In Real Madrid ay Eden Hazard la soo wareegtay isla markaana ay doonayaan Kylian Mbappe waxay muujinaysaa sida ay uga go’an tahay in ay badalaan xaaladii murugada badnayd ee ay xili ciyaareedkii dhamaaday soo qaateen.
Zinedine Zidane ayaa wali maamulka kooxdiisa ka doonaya in ay Bernabeu u keenaan Pual Pogba laakiin rajada ay Madrid ku heli karto Kylian Mbappe ayaan wali meesha ka bixin iyada oo Perez uu iska diidan yahay in uu isdhiibo.
Real Madrid ayaa sidoo kale dagaal ugu jirta in u hogaansanto sharciga dhaqaale wanaaga yurub waxaana qasab ku ah in ay ciyaartoy badan iibiso si ay lacag uga samayso taas oo ay xisaabta kooxdeeda ku dheeli tiri doonto.
Si kastaba ha ahaatee, jamaahiirta Real Madrid ayaa u dheg taagaya haddii wax horumar ah ay kooxdoodu ka samayn karto soo xero galinta Kylian Mbappe kaas oo hadda lagu tilmaamay xidiga kubbada cagta aduunka ugu qiimaha badan.